Jam Blackberry - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Fifaliana foana ny manome mandeha ary mampiala voly ny tenanay amin'ny fakana voankazo matsiro, indrindra rehefa vanim-potoana blackberry.
Ao amin'ny fianakaviako dia efa fomban-drazana ny mitady ireo voaroy. Ny zavatra mahatsikaiky indrindra dia ny hoe tsy mila mandeha lavitra isika satria ao amin'ilay tanàna an-tanànantsika izay misy antsika dia be ny brambles.
Tamin'ity taona ity dia efa nanentana ny zanako vavy aho nandritra ny andro vitsivitsy mba hanampy ahy mioty. Na dia manana ny fanampian'ny zanaky ny mpifanolobodirindrina amiko aza aho izay rehefa nahita anay dia nanomboka niara-niasa hoe: Ary inona no fomba fahandro hataonao amin'izy ireo ...? Azonao an-tsaina fa novaliako izy ireo !! 😉
Matetika aho no manao an'io fako io matetika siramamy. Fantatrao sahady fa tiako ahena izany isaky ny afaka aho mba tsy ho mamy ry zareo fa, amin'ity tranga ity, raha mihena be dia mety ho lasa mangidy ary tsy hahatratra ny fitehirizana sahaza.
Ampiako koa ny rano mba tsy ho matevina loatra, satria tsy tiako ny tena fitohanana.
Rehefa manomana azy, raha tianao dia azonao atao esory ny voa. Mora be izany, mila manorotoro ny blackberry fotsiny ianao amin'ny rano ary avy eo mamaky azy amin'ny alàlan'ny saringan sinoa na harato tsara. Ka efa manana ny pulp vonona ny hanao ny fitohanana ianao.
Raha tianao haharitra amam-bolana maro ny fitohatohanao dia ny zavatra tsara indrindra arovy ao anaty banga izy ireo ahoana no nataonay tamin'ity peach jam nanan-karena toy inona moa isika.
Tsy hitovy amin'ny sakafo maraina namboarin'io trano io intsony ny sakafo maraina.
Fotoana hiketrehana: 26M
Fotoana manontolo: 26M
500 g ny blackberry (voasasa ary tsy misy tahony)
Rano 125 g
Sasainay tsara ny blackberry ary ataontsika ao anaty vera miaraka amin'ny rano sy ranom-boasarimakirana. Torotoro izahay mandritra 6 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 8.
Avy eo izahay dia manampy ny siramamy sy ny programa 25 minitra, maripana varoma, hafainganana 2 sy 1/2.
Raha amin'ny farany dia toa misy zavatra sisa tavela, afaka nametraka 5 minitra fanampiny isika, amin'ny hafanana sy hafainganam-pandeha mitovy, tsy misy bikan-drano ary apetraho eo amboniny ny harona mba hisorohana ny famafazana.
Avy eo dia apetratsika ao anaty siny fitaratra ny fako, akatona ny sarony ary avelantsika hivadika mandritra ny 24 ora.
Aorian'ny fotoana fialan-tsasatra dia ho vonona ny hitahiry ao anaty vata fampangatsiahana ireo siny.
Fanazavana fanampiny - Famoahana paiso
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny 1/2 ora, Jams ary mitahiry, Resipeo ho an'ny ankizy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Recipe manokana » Celiac » Jamam-parasy
Silvia, tsara tarehy toy inona ianao. Ny marina dia voankazo mareva-doko ka toa tsara daholo izay ataonao.
Ity jam ity dia ny lokony izay manintona ny saina ary matsiro. Sahia manandrana.
3 herinandro lasa izay no nanaovako azy, mahamenatra ny tsy fananako ny sakafonao! Satria, hoy ianao, tsy nanampy rano aho ary matevina, na dia matsiro aza. Hizaha ny fomba fahandro anao aho ary ho hitako ny vokany. Azo antoka fa toa tsara.
Begoña, miaraka amin'ny rano dia malefaka kokoa ny endriny ary manankarena be.
Aristote dia hoy izy:
Ary ahoana ny amin'ny voan'ny blackberry? Tsy afaka nanala azy ireo aho na dia tamin'ny pasapure aza. ireo voa voalaza teo dia mafy lavitra noho ny frezy ohatra ary tsy mahafinaritra ny mitsako. Tamin'ny farany dia voatery notsindriko tamina fantsom-pako nentim-paharazana ary avy eo eny ... fa kely noho ny asa sinoa.
Misy manana hafetsena na fanafody ve? fiarahabana.
Valiny amin'ireo aristoteles
Ny marina dia marina ny anao, ny voa dia mihodina fa saika efa zatra azy ireo aho. Na eo aza izany dia hanaraka ny torohevitrao amin'ny saring aho fa raha tsy maintsy manam-paharetana ianao dia hiala.
Manampy paoma pippin roa ihany koa aho, roa ho an'ny blackberry telo na efatra kilao ny roa, eny, tsy manampy rano aho.
Mba hanesorana ireo masomboly dia ampiasaiko ny masinin-tanana izay amidin'izy ireo ao amin'ny magazay fivarotana ho an'ny voatabia. 20E eo ho eo ny vidiny. Mazava ho azy fa laniko aorian'ny fanaovana jam (esory ny masomboly). Amin'ny herintaona dia hataoko alohan'ny hamonoana ireo blackberry miaraka amin'ny siramamy. , izao.tsy hoe raha tsy izany dia tsy manala ny voa fotsiny ianao fa koa ampahany amin'ny syrup azo
Ho hitantsika eo ny endriny
Miarahaba, manantena aho fa manampy anao io
Misaotra nizara ny hafetsenay taminay !!
Izaho koa dia mandany ny fahavaratra manontolo amin'ny fanaovana «jams» noho ny tsy fanariana ny voankazo amin'ireo hazoko, ary misaotra ny thermomix nataoko fa tsy matavy loatra aho ary tapitra anaty jiffy. Matetika nasiako gelatine vovoka tsy miandany na voasarimakirana ka tsy dia be ranoka, nefa tsy matevina koa, tonga amin'ny fotoana lavorary koa. arahaba ary misaotra indray.
Nampiako gelatin ilay frezy taloha, izay tena be ranony, saingy efa azoko ny hevitra ary tsy mila manampy an'izany aho.
Julia Quilis dia hoy izy:
Raha tiako hihamafy izy io, dia ampiako agar-agar vovoka eran'ny sotrokely ary mijanona amin'ny fomba itiavako azy io.
Valiny tamin'i Julia Quilis
Nataoko tamin'ny herinandro lasa iny, fa tsy nandatsaka rano tao anatiny dia nampiana ilay ranom-boasarimakirana voahidy ary manana firafitra tsara.
Tsara Alicia, hanoratra an'io safidy io koa aho. Misaotra sy arahaba indrindra
Ny zanako vavy tsy mila iray hafa, tiany ilay blackberry. Ary izay lazainao, mahafinaritra tokoa ny mandany ny tolak'andro amin'ny fanangonana azy ireo. Fomban-drazana isaky ny fahavaratra.
Eny Luz, ny kely no tiako halaina azy ireo, na dia mientanentana aza izy ireo indraindray ary manadino fa misy spikes ... mahantra!
Salama, tsara be ilay «mache», nanao azy ireo aho tamin'ity fahavaratra ity avy tamin'ny melon sy aviavy izay nomeny fanomezana maro ary nanamontsana vitsivitsy hanamboarana jam. Misaotra tamin'ny resipeo
Endrey, matsiro, ny marmaladesinao Mari Carmen. Andao hojerentsika raha sahy aho ary manao melon ny tenako.
Roci dia hoy izy:
Toa matsiro izany! Ankehitriny rehefa tonga amin'ny vanim-potoana isika dia tsy maintsy manararaotra maka ireo blackberry ary manatona azy!
Saingy, fanontaniana iray: efa nanandrana nanao jamam-berry tamina fonosana mangatsiaka ve ianao?
Valiny tamin'i Roci
Roci, ny marina dia mbola tsy nanandrana aho ary mieritreritra aho fa tokony hivoaka tena tsara. Raha manandrana milaza aminay ny fomba.
Salama!! Tena mpankafy ny bilaoginao aho !! isan'andro mitsidika azy aho dia mijery azy ary mijery azy !!! Tiako ny mahandro sakafo ary tiako thermomix ary miaraka amin'ny resinao, fika sns. manampy ahy be ry zareo !!! Tiako ny bilaoginao !! ary hoy aho fa tonga ny fotoana handefasanao fiarahabana sy fiarahabana azy ireo noho ity bilaogy mahafinaritra ity !! ka arahabaina avy any Banyoles !! Oroka !!
Misaotra betsaka an'i Laura tamin'ny teninao, tamin'ny fanarahana anay sy ny fanohananao. Faly aho fa tianao ilay bilaogy.
fitorevahana dia hoy izy:
Salama, ilay misy blackberry, ity masina ity, nataoko izany ary tsy ampy siramamy aho na asidra loatra ny blackberry, hitako fa azo atao avy amin'ny melon izy io.
Mamaly an'i sita
Chary dia hoy izy:
Salama SIlvia azafady, nataoko fotsiny ny fihenan'ny Pedro XImenex, tsara fa mivoaka matevina loatra, misy ny vahaolana hanamboarana azy misaotra
Valiny tamin'i Chary
Chary, raha miverina indray izany dia ampio rano sy divay kely amin'ny faritra mitovy.
Mividy tsy misy gluten - Juan dia hoy izy:
Inona no fomba fahandro tena tsara, ary mety amin'ny celiac !!! tsara, misaotra betsaka, hanandrana izany tsy misy fisalasalana izahay, noho izany dia ho hafa kely ny tsakitsaky na ny sakafo maraina ... izay ilainay ... tamin'ny fomba vao nahitako ny bilaogy, ary nizotra ho any amin'ireo tiako indrindra izany. ..
Valiny hividianana gluten-free - Juan
Juan, saika manandrana manomana fomba fahandro mifanentana amin'ny tsy fandeferana amin'ny sakafo sasany aho, na manome hevitra ny antony hanoloana singa iray hafa. Angamba, satria fantatro kely ny celiacs, satria manana zana-drahalahy roa tsy mahazaka gluten aho. Faly aho fa tianao ilay bilaogy.
Gorka dia hoy izy:
Bilaogy mahafinaritra ary arahabaina amin'ny laharam-pahamehanao amin'ny loka Bitácoras. Hanaraka akaiky ny bilaoginao izahay ary mirary vintana ho anao. Mirary ny soa indrindra.
Mamaly an'i Gorka
Misaotra betsaka anao nanaraka anay.
Emma abella dia hoy izy:
Hanandrana aho. Indraindray tsy atsahako ny fizarana fanehoan-kevitra ka apetrako eto: tiako ny resinao !!! Ary taiza no tsy nahazo "fampielezana hevitra", nandefa hafatra?
Valiny tamin'i Emma Abella
Salama maraina avy any Tenerife, mba misy mahalala ve ny fomba fahandro ny amina voaloboka?
Misaotra betsaka noho ny pejy ary nandefa resipeo anay saika isan'andro.
Beti, ny marina dia mbola tsy nanandrana aho fa angamba hamporisika ahy izany. Andramo antoka fa ho tsara ho anao izany.
Salama, te hahafantatra ny fomba fanaoko aho mba tsy ho mangidy ny fitangoronana, mety ho mihoatra ny ora mahandro ve aho? Mametraka ranom-boasarimakirana be loatra ao ve aho? Ampio aho azafady, Tsy ho ela!
Fiarahabana avy any Kolombia.
Manampia ranom-boasarimakirana eran'ny sotrokely fotsiny ary jereo ny fomba fiasan'izy io.
Efa tena matevina sy tsara ny tsiro saingy tsy azo atao ny manaparitaka azy, inona no azoko atao? arotsaho amin'ny hafanana sy ny hafainganana ny hafanana, ka mifangaro izany, matahotra aho sao tsy mifangaro ny mafy be. Misaotra anao
Salama Maria Jose:
Raha tadiavinao ny hevitro manetriketrika dia avelao ho toy izao. Ataovy ao anaty fitoeram-pisaka izy ary ampiasao toy ny hoe manana quince ianao.
Ny fotoana nanandramako nanamboatra gazy matevina dia vitako ihany ny nanimba azy, ka izao rehefa tonga amiko dia lazaiko fa mamy blackberry ... miaraka amin'ny fromazy vaovao dia mahafinaritra !!
Ramôni dia hoy izy:
Salama ry girlssss, raha tsy siramamy no ampidirintsika stevia ¡¡¡the amin'ny jamama dia hitovy ihany izany .. ..
Valiny tamin'i Ramoni
Misaotra amin'ilay hevitra Ramoni!
Sakafo fisakafoanana banana sôkôla mamy